Tora-bato Miverina: Maninona No Mety Hanatevina Laharana Ny ISIS Ny Lehiben’ny Hery Manokana Ao Tadjikistan ? · Global Voices teny Malagasy
Tora-bato Miverina: Maninona No Mety Hanatevina Laharana Ny ISIS Ny Lehiben'ny Hery Manokana Ao Tadjikistan ?
Voadika ny 03 Jona 2015 12:43 GMT
Vakio amin'ny teny Español, عربي, Français, bahasa Indonesia, English
Halimov ao anatin'ilay rakitsary. Nosintonina avy amin'ny lahatsary izay nofafàna taty aoriana.
Ao Tajikistan faritra Sovietika fahiny, toerana izay ny horohoro sy ny tahotra ny fivavahana mahery fihetsika no nanampy hanamarina ireo famoretana tafahoatra ny fampiharana ny finoana Silamo, tohina ny olona nandre hoe toa lasa nanatevina laharana ny vondrona henjam-pihetsika ISIS ilay lehiben'ny hery manokan'ny polisy malaza nofanina hiady amin'ny mpampihorohoro.
Ambaran'ny manampahefana ao amin'ny governemanta fa manakaiky ny 400 ireo teratany Tajik no lasa miady miaraka amin'ny ISIS, rantsana iray an'ny Al Qaeda izay tonga hifehy ny ampahany midadasika amin'i Irak sy Siria tamin'ny fampiasana tetikady feno habibiana, famoretana ary herisetra.
Tao anaty lahatsary iray navoaka tamin'ny 27 May lasa teo, nilaza ho niala an-daharana mba handeha hanatevina ilay vondrona i Gulmurod Halimov, 40 taona, ho fanoherany ny politikan'ny Ministeran'ny Atitany Tajik, izay tsy mamela ny vahoaka hivavaka sy hitafy ny voaly Silamo” ao anatin'ilay firenena ao Azia Afovoany izay ny Miozolmana no betsaka indrindra.
Ho fanampin'ny fiantsoany ny filoham-pirenena sy ny minisitry ny atitany ho toy ny alika ary ny fanomezany toky ‘hiverina handrasarasa [ny governemanta]”, milaza i Halimov fa sady niofana tany Rosia no tany Etazonia, izay soritany ho firenena tsy mpino amin'ny kina mivaivay nataony.
Nakarina ho amin'ny laharan'ny Komandy noho ny asa niavaka vitany tao anatin'ny telo taona lasa, matahotra ankehitriny ny sasany hoe ilay fisehoany miparitaka be, ravahan'ny fitifirany voatabia iray taminà basin'ny mpitily, dia mety hahatonga azy ho filamatr'ireo Tajik handeha ho mpiadin'ny ISIS amin'ny hoavy.
Ato ho ato , andrasana hamoaka fanambaràna feno momba ny fitsoahana an-daharan'i Halimov ny governemanta Tajik ary hanakana ireo media sôsialy nizaràna ilay lahatsary tamin'ny 28 May, hatramin'ny Asia Plus, ilay masoivohom-baovao Tajik izay nandrakotra voalohany ity tantara ity.
Edward Lemon, mpikaroka avy amin'ny Anjerimanontolon'i Exeter mikaroka momba ireo Tajik mpiady any Siria sy Iràka dia nibitsika hoe :
Io no lahatsary tsara indrindra novokarin'ny tena manokana nataon'ny Tajik iray mpiadin'ny IS . Tsy nahagaga, nampiasain-dry zareo malaky i Halimov ho amin'ny tanjona fandraisana olona
‘Avy any amin'ny faritany misy ny ISIS no handefa hafatra ireo Minisitra’
Ao Tajikistan, nanameloka ilay Komandy daholo ny mpamaky.
Aziz nanoratra taorian'ilay lahatsoratry ny masoivohom-baovao Asia Plus ao an-toerana , hoe:
Adala i lery. Manana vitsivitsy amin'ny olona adala toy ireny isika, mazava loatra, saingy notendren'ny Ministeran'ny Atitany ho amin'ny toerana ambony ny iray tamin'izy ireny – ho komadin'ny OMON [rantsana manokan'ny polisy].
Betsaka amin'izy ireny no nanatsiny ny politikan'ny governemanta ho fototry ny olana amin'ny antso ataon'ny ISIS amin'ireo Tajik sasantsasany.
Olona mpaneho hevitra tao amin'ny Asia-Plus, antsoina hoe FG, namaly an'ireo rehetra nanameloka an'i Halimov:
Ho anareo mpaneho hevitra, aza mihatsara ivelantsihy. Nilaza ny anton'ny fihetsika nataony izy [mantsy an'i Halimov] …Niady nanohitra ny tantara efa an'1000 taona niainan'ny firenena [ny governemanta], niteny tamin'ny vahoaka ny fomba tokony ho fitafy, ny toerana tokony haleha, ny zavatra tokony hohanina, ny tokony hatao, ny tokony hiankohofana, sy ny maro hafa. Araka izany, voajanahary raha toa manao izay fomba rehetra hivoahana amin'izany fonja izany ny tsirairay. Tsotra fotsiny ny antony: ny fihetsika mifanohitra amin'ny lalàm-panorenana ataon'ny governemanta.
Izzat Amon, Tajik mpiaro ny zon'ny mpifindramonina, koa dia nilaza fa ilay lazaina ho fanatevenana laharana ny ISIS nataon'i Halimov dia vokatra nateraky ny politikan'ny fitondrana Tajik.
Nanoratra izy ao amin'ny pejiny Facebook hoe :
Tsy manamarina ireo fihetsiky ny komandin'ny OMON aho, fa mahatakatra kosa ny zavatra tsapany. Rehefa kolikoly, fampisaraham-bazana, ary kiantranoantrano no misoko eto amin'ny firenena ary mandainga daholo ny olona, avy eo tsy safidy hafa intsony. Io no vokatry ny politikan'ny vondron'ny mpitondra tato anatin'ny 25 taona farany. Raha mitohy amin'izao io, dia na ireo minisitra aza ho avy any amin'ny faritra misy ny ISIS no handefa hafatra. Ry manampahefana malala isany, tohizo ny adinareo manohitra ny hijab, ny volombava, ny Azan [antso hivavaka] ary ireo fomba Silamo hafa. Saingy azo antoka fa hisampontina hiverina aminareo toy ny tora-bato miverina izany.
Rahmatillo Zoirov, mpitarika ny antoko Sosialy Demaokraty ao Tajikistan, iray amin'ireo antoko mpanohitra vitsy ao amin'ny firenena, niteny tamin'ny Asia Plus fa ireo fanendrena vondrona madinika manodidina ny filoha no mety ho iray amin'ny antony nandaozan'i Halimov ny asany, ny vadiny ary ny zanany valo ka nandehanany nanatevina ny ISIS.
Zoirov nanamarika hoe :
Ny politikan'ny akamakama, indrindra eo amin'ny sehatry ny fampanjakàna ny lalàna sy ny rafi-pitsaràna, no tena antony mavesatra amin'ny fahakiviana manjo ireo mpiasa tsy ao anatin'ireny vondrona madinika ireny, izay avy eo mila maka tsoakevitra mifandraka amin'izany… Amin'ny ankapobeny, marobe no mametra-pialàna fotsiny izao noho ny tsy fahitàny mangirana amin'izay ho fisondrotana na fandrosoana amin'ny asany.
Nobahanan'i Tajikistan ireo loharanom-baovao rehetra ety anaty aterineto mifandray amin'ny ISIS teo aloha, voamarika indrindra amin'izany rehefa injay marobe ao amin'ny YouTube ireo olom-pirenena mandefa lahatsary misy azy ireo mandoro ny pasipaoro Tajik ary manao tokim-panompoana amin'ilay vondrona. Ezaka tahaka izany hifehezana ny ara-pinoana amin'ny alàlan'ny fandraràna ny fiharàtana sy ny fisalobonana, kanefa, hatreto tsy nitondra ho aminà fahazoana vokatra nahomby ireo fibahànana.